Kooxda Fanka Waayaha Cusub oo Wacdaro ka Dhigay Jijiga, Waxna u Sheegtay Jwxo-shiil – Rasaasa News
Sep 13, 2011 http://vimeo.com/28905161
Jijiga, Sep 13, 2011 [ras] – Dhagoole wax wuu maqlaa, Doqon wax ma maqlo. Waxaa jiri jiray labo nin oo walaalo ah mid Caran buu ahaa midna dhagool, waxayna xoolo isku qabsadeen nin kale. Dhaqanka Somalida kolka wax la isku qabsado maxkamada ugu saraysay ee la is geeyo waa geedka garta.
Labdii nin ee walaalaha ahaa ayaa isku qabsaday midkii u fadhiisan lahaa geedka garta, Carankii baa wuxuu ku dooday; Dhagoole waxa laga doodayaba maqli maysid ee sidee baad garata u qaadan ama aad u diidi hadii lagaa helo iyo hadii aad adigu heshidba.
Dhagoolkii ayaa isna ku dooday; wax waan maqlaa oo garasho ayaan leeyahay aniga ayaana geedka fadhiisan. Labadii walaalaha ahaa ayaa u baahday in la dhexgalo!
Odayaashii garta dhex dhexaadinayey ayaa waxay go,aansadeen in labada nin ee walaalaha uu midba maalin geedka garta fadhiisto, dabadeedna wixii ka soo baxa wax lagu gooyo.
Carankii ayaa maalintii kowaad fadhiistay geedkii garta, waxay gartii u ekaatay in Caranka reerkoodu gardaran yahay gartana laga leeyahay, waa sida ay guurtidii garatay, nasiib daro Caranku garta ruuxna uma ogola gar iyo gardaraba waa in uu isagu helaa. Sidaas ayaana maalintii kowaad tiiyoo aan wax go,aan ah la qaadan geedkii laggaga kacay.
Maalintii labaad ayaa waxaa geedkii soo fadhiistay ninkii Dhagoolka ahaa, maantoo dhan ayuu ragii doodayey kolba mid dhawraa waxaana u cadaatay in ay guurtidu isku raacsan tahay in garta laga helay.
Kolkii hadalkii la siiyey Dhagoolkii ayuu yidhi “waan qaatay in gartii la iga helay,” dadkii baa yaabay oo yidhi waad dhago la,adahaye sideed ku ogaatay in gartii lagaa helay, wuxuu yidhi “waan dhago la,ahay ee ma caqli li,i,” “waayo dadkoo dhan baa i soo dhawrayey.”
Dhagoolkii ayaa habeenimadii u sheegay walaalkii in gartii laga helay oo ay geel bixinayaan, Carankii ayaa cadhooday oo qool madaxa kaga dhuftay walaakii. Gabagabadii Doqonkii Geela waa Walaalna waa.
Fiirso Fanaaniinta Waayaha Cusub, oo Caranka Caawinaaya
Kenya oo Kolkii Ugu Horaysay Aqoonsatay in Kooxda Jwxo-shiil Joogto Dalkeeda Dilalna ka Fulisay